पानी छोयो भनेर दलित कुटिए
जवानी चल्ने, धन चल्ने तर छोएको पानी नचल्ने ?
दलितले सगरमाथा चढ्यो भने सगरमाथाबाट हिउ“ पग्लेर बग्ने पानी छोइन्छ कि छोइन्न ? यो विषयमा लामो बहस चल्न सक्छ । तर धारामा पानी थाप्दा छोइयो भनेर सुर्खेतमा दलित कुटिए । यसबारेमा सुर्खेतको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संसदका जनप्रतिनिधिले मुख खोलेनन् जनप्रतिनिधिले नै छुवाछुतबारे नबोल्ने हो भने यो सामाजिक कुरिती त बढ्छ बढ्छ । कसरी समाज सुधार हुनसक्छ ?
खबरअनुसार सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका अन्तर्गत साटाखानीमा पानी छोएको आरोपमा दलित महिलामाथि कुटपिट भएको हो । गैरदलितको कुटपिटबाट २७ वर्षीया टीकाकुमारी मिजार गम्भीर घाइते भएकी छिन् । उनको वीरेन्द्र नगरस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । स्थानीय मनकुमारी राई र उहा“का छोराले दलिन महिला टीकामाथि कुटपिट गरेका हुन् ।
अस्पताल पुगेपछि थाहा भयो– कुटपिटका कारण टिकाको टाउको, छाती र शरीरका अन्य भागमा समेत चोट लागेको छ । कुटपिटपछि बेहोस अवस्थामा टिकालाई आफन्तले स्थानीय मिलेर अस्पताल पु¥याएका थिए । नाक र मुखबाट अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि अस्पतालले बल्ल बल्ल उनलाई बचाएको छ । म धारामा नुहाउ“दै गरेको र पानी भर्ने क्रममा गाग्री छोइदिएको भन्दै मनकुमारीका आमाछोरा मिलेर आफूमाथि कुटपिट गरेको पीडित टीकाले बताएकी छिन् । दलित समुदाय न्याय चाहियो भनेर स्थानीय प्रशासन गुहार्न पुगेका छन् ।